ब्लेक क्लासिक ब्लेक क्लासिक
ब्लेक एक धेरै लोकप्रिय क्लासिक क्यासिनो आधारित तालिका खेल हो र त्यहाँ एउटा फरक पक्ष शर्त सुविधा र नमस्ते लो जुवाडे एक यस्तो फोन क्यासिनो शीर्ष खेल हो अनलाइन हो यो धेरै भिन्न. यो संस्करण तपाईं थप विजेता को आफ्नो संभावना बढाउँछ भन्ने प्रति हात एक पक्ष शर्त सहित मा शर्त सक्नुहुन्छ हात दिन छ. तपाईं कार्ड को डेक संग पेशेवर सेट एक उच्च गुणवत्ता तालिका पाउन सक्नुहुन्छ, चिप्स, र आफ्नो स्थिति ट्र्याक गर्न scoreboard. त्यहाँ खेल मा राम्रो अर्केस्ट्रा संगीत लात मार आफ्नो सचेत राख्न पृष्ठभूमिमा प्ले र जीवित छ. मुख्य र पक्ष खेल दुवै लागि सट्टेबाजी सीमा £ 1 मिनेट र प्रति हात £ 500 को एक अधिकतम छन्.
नमस्ते लो जुवाडे विकासकर्ता बारेमा :
विकासकर्ता NYX छ (व्यावहारिक) र तिनीहरू सबै आफ्नो क्यासिनो खेल मा व्यावहारिक गेमिङ अनुभव प्रदान नाम सुझाव रूपमा. आफ्नो फोन क्यासिनो शीर्ष खेल श्रेणी मा अचम्मको विषय र नवीन सुविधाहरू, तिनीहरू संसारमा शीर्ष स्तर खेल विकासकर्ताहरूले बीचमा राख्न व्यवस्थित छन्.
यस फोन क्यासिनो शीर्ष खेल जहाँ आफ्नो उद्देश्य प्राप्त गरेर बिक्रेता पिट्न छ क्लासिक ब्लेक खेल को मानक र आधारभूत नियम पालना 21 अंक वा यसलाई घनिष्ठ नम्बर. तपाईं अधिक यदि त्यो सम्झना 21 अंक, तपाईं हात गुमाउन र एउटै अन्य सबै हात लागू. तपाईं भनिन्छ कि 'नमस्ते लो' एक देखि पाँच र त्यसै संग पक्ष शर्त खेल हात को कुनै पनि संख्या मा बाजी राख्न एक विकल्प. यहाँ तपाईँले नमस्ते वा लो या त चयन गर्न हुनेछ, जहाँ तपाईं पहिलो भन्दा आफ्नो दोस्रो कार उच्च मूल्य छ भने उच्च जित्न सक्छौं र लो संग दोस्रो जीत पहिलो भन्दा कम मान छ छ.
खेल प्राथमिकता: केही उपयोगी खेल जस्तै तालिकाको रंग विषय परिवर्तन र संगीतको लागि मात्रा समायोजन यस फोन क्यासिनो शीर्ष खेल सेटिङहरू, ध्वनि प्रभाव, & यस बिक्रेता आवाज. तपाईं पनि सक्षम वा बीमा शीघ्र अक्षम गर्न सक्छन्, पनि पैसा, खेल चेतावनी, स्वतः अडान र बस्ट कार्ड हटाउन.
स्वचालित दृढ अडान: तपाईं हार्ड आफ्नो हात स्वतः खडा गर्न चाहनुहुन्छ भने यो एक उपयोगी सुविधा छ 17, 18, 19 वा 20 साथै नरम मा रूपमा 19 & 20. यी संख्या मा खडा सामान्यतया बस्ट रही जोगिन गर्न सिफारिस गरिएको छ.
भुक्तानी: बिक्रेता हात पिटाई भुक्तानी हुनेछ 100% आफ्नो शर्त रकम, बीमा दिन्छिन् 150% र ब्लेक WINS भुक्तानी 250% आफ्नो शर्त रकम.
सारांश: यस फोन क्यासिनो शीर्ष खेल आफ्नो विजेता सम्भावनाहरू वृद्धि गर्न पक्ष शर्त सुविधा संग धेरै लत खेल हो. सुविधाहरू र विकल्पहरू साँच्चै यो खेल ब्लेक सबैभन्दा लोकप्रिय भिन्न को एक बनाउँछ कि बाहिर खडा.
ब्लेक6मा 1